Waxaan ahay gabar jirta-16-sanno. Waxaana joogaa dalka Jarmal kaliya dhowr todobaad. Meeshaan wax kasta way ka duwanyihiin sidaan ku bartay. Sidee tahay qaabka nolosha dumarka iyo gabdhaha dalkan Jarmal? – Tips for refugees
Previous Previous post: Saaxiibadayda waxay rabaan in aan u raaco barkad biyo lagu dabaasho (14). Halkaasi waxaad ku arkaysaa dumar qaawan. Run miyaa midaasi?
Next Next post: Da’dee la ii oggolyahay in aan galmo sameeyo?